Home Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ 'Ọbara miri' Trailer na-enye gị Jaws Ripoff n'adịghị ka ihe ọ bụla ị chere na ọ ga-ekwe omume
Joe D'Amato dị ebe a iji nye gị a jaws dọpụ akụkụ ahụ anya na-adịghị ahụ anya. Chọpụta, ị hụla ọtụtụ jaws dọpụ ma ị hụla ka D'Amato mere ha, a na-ese ha na Florida? N'oge na-adịghị anya, ị ga - enwe ike ịnweta ya na blu ray sitere na ndị mara mma na Severin na MVD Entertainment Group. Yabụ, jikere maka ọtụtụ Florida na ọtụtụ eserese ngwaahịa Shark… oh na ịmị amị, jikere maka ịsụ ụcha.
N'ebe dị na Florida na-egwu mmiri na ọdọ mmiri ọdọ mmiri Rome, Director Joe D'Amato jikọtara '80s nkiri cliches na American mysticism na mkparịta ụka na-akpali agụụ mmekọahụ, ihe ngosi kachasị elu na shark eserese nke Bruno Mattei ga-emecha swipe maka CRUEL JAWS iji mepụta ihe Oh, The Horror! na-akpọ “ahụmahụ dị omimi, nke na-enweghị isi na-arịọ ka a chọpụta ma nabata ya.”
Ugbu a, D'Amato maka ndị na-amaghị akwụkwọ bụ onye nduzi bi na mbara ụwa a. Ọ bụ eze nke trashy, sleaze ma ezigbo ụdị, ma ọ bụrụ na ị maara ihe m na-ekwu. Ọ nọ n'azụ nnukwu ndenye nke Emmanuel. Ọbara miri emi, dị nnọọ ka vibes nke Emmanuel bụ ezigbo ihe nkiri. N'agbanyeghị na ọ bụ ngụkọta rip-apụ na ngụkọta sleaze fest. Ọ na-achịkwa ịbụ otu narị pasent na-atọ ụtọ yana otu n'ime ihe nkiri ndị ahụ e chere na ọ bụ "ọjọọ" nke ndị dị ka m hụrụ n'anya.
D'Amato's Ọbara miri emi na-apụta n’abalị iri abụọ na asaa nke ọnwa Eprel, e kwesịghị ịhapụ ya. Isi ebe a ka bulie nke gị.
Ihe nkiri ụgbọala maka Marvel's Shang-Chi na Akụkọ Ochie nke Mgbaaka Iri ebe a na-awụlikwa gị elu na ihu. Lelee ya ebe a.
Blu iheỌbara miri emiJoe D'AmatoOtu MVD Entertainmentseverin
'The Resort' Trailer Na-ewebata Chidị Mkpụrụ Obi Ọhụrụ